Lexus ဆိုတာ အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေထုတ်လုပ်ရာမှာ ကျော်ကြားလှတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ Lexus ရဲ့ SUV တွေဟာ ခြွင်းချက်မဲ့ ရောင်းအကောင်းဆုံးတွေထဲမှာ အမြဲပါဝင်လေ့ရှိတယ်။ SUV အသေး (compact SUV) Lexus NX နဲ့ SUV (ပုံမှန်အရွယ်အစား SUV) Lexus RX နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ပုံစံအားဖြင့် ထင်ရှားတယ်၊ စတိုင်ကျတယ်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိတဲ့ နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားကြတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးထဲက တစ်မျိုးကို ရွေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ။ NX လား? RX လား?
NX နဲ့ RX အဓိက အရွယ်အစားကွာပါတယ်။ Lexus NX ဟာလူငါးယောက်စီး compact crossover လို့ပြောချင်ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းအရတော့ ပိုကြီးတဲ့ RX ထက်ချောမွေ့တယ်၊ တောက်ပြောင်တယ်။ NX ရဲ့အတွင်းခန်းဝင်ဆံ့မှုက 2,028-liter အထိရှိပြီး တစ်စီးလုံးအမြင့်က 64.8-inch ရှိတယ်။ ငါးယောက်စီး RX မှာကတော့ ပိုပေးရတဲ့ငွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ နေရာလွတ်တွေရမယ်။ ခြေဆန့်၊ လက်ဆန့် ပိုလုပ်လို့ရမယ်။ အရပ်မြင့်တဲ့လူတွေအတွက် သာလွန်တဲ့အဆင်ပြေမှုကိုရမယ်။ ချဲ့ထားတဲ့ RXL မှာဆိုရင်တော့ ခုံသုံးတန်းကို ထပ်ဖြည့်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ပစ္စည်းဝင်ဆံ့မှုက တော်တော်ကြီးကိုသာသွားမယ်။ ပုံမှန် Lexus RX ကတော့ NX ထက် ခြေထောက်၊ ပုခုံး၊ ခေါင်း အားလုံးအတွက် ပိုသာတဲ့နေရာလွတ်တွေရလာမယ်။ အတွင်းခန်းဝင်ဆံ့မှုပမာဏက 3,435-liter အထိရှိသွားမယ်။ အမြင့်ကလည်း 67.7-inch အထိရှိသွားမယ်။
အပြင်ပိုင်းသက်သက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ NX က မျက်စိပသာဒဖြစ်စရာပိုကောင်းပြီး 17-inch ဘီးတွေကို standard အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ Premium Package ဒါမှမဟုတ် NX F SPORT တွေဆိုရင်တော့ 18-inch တွေနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ RX ကတော့ 18-inch ဘီးကို standard အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အတွေ့ရအများဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ 20-inch ဘီးတွေအထိလည်း မြှင့်တင်လို့ရတယ်။
NX - အလျား 182.7-inch x အကျယ် 73.6-inch x အမြင့် 64.8-inch နဲ့ wheelbase က 104.7-inch
RX - အလျား 192.5-inch x အကျယ် 74.6-inch x အမြင့် 67.7-inch နဲ့ wheelbase က 109.8-inch
RXL - အလျား 196.9-inch x အကျယ် 74.6-inch x အမြင့် 67.7-inch နဲ့ wheelbase က 109.8-inch
ရနိုင်မယ့် models တွေ
Lexus ရဲ့ NX ရော RX ပါ standard အနေနဲ့ကရှေ့ယက်တွေနဲ့လာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ All-Wheel Drive နဲ့လိုချင်လည်း နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ရှိတယ်။ NX 300h နဲ့ RX 450h ကတော့ All-Wheel Drive ကို standard အနေနဲ့ model အသစ်မှာရရှိနိုင်မှာပါ။
NX မှာ 2.0-liter Turbo inline 4-cylinder အင်ဂျင်က standard အနေနဲ့တပ်ဆင်ထားပြီး 235-hp အထိ အမြင့်ဆုံးပါဝါထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ RX ရဲ့ standard အင်ဂျင်က 3.5-liter V6 အင်ဂျင်ဖြစ်ပြီး 295-hp အထိထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါ။ NX ရော RX ပါ Lexus ရဲ့ F SPORT trim နဲ့ရရှိနိုင်ပြီး လောင်စာဆီကုန်ကျမှုသက်သာစေဖို့ hybrid powertrain နဲ့လည်း ရရှိနိုင်တယ်။ RX မှာတော့ RX 450h ဆိုရင် F SPORT trim နဲ့ AWD နှစ်မျိုးပေါင်းအဖြစ်နဲ့ RX 450h F SPORT ဆိုပြီးပါရနိုင်တာပါ။
Lexus RX နဲ့ NX နှစ်မျိုးစလုံးဟာ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရတဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့လာတာပါ။ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍမှာလည်း တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ ဖုန်းမှာ app ထည့်ပြီး ကားနဲ့ချိတ်ဆက် အကောင်းဆုံးသုံးလို့ရတဲ့ Enform App Suite ၊ HD ရေဒီယို ၊ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းစရာမလိုတဲ့ ယာဉ်လမ်းကြောနဲ့ မိုးလေဝသ နောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေအပြင် Siri Eyes (iPhone နှင့် ကားချိတ်ဆတ်ကာ Siri စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း) ကိုလည်းအခမဲ့ရရှိမှာပါ။​ Enform App Suite 2.0 ကို NX မှာ standard အနေနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ RX မှာတော့ Enform App Suite 2.0 ကိုအသုံးပြုချင်ရင်ရပေမဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် 2020 RX ကျမှပဲ standard အနေနဲ့ပါရှိလာမှာပါ။
လမ်းကြောင်းပြသမှုအတွက်လား။ Lexus ရဲ့ SUV နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဂြိုဟ်တုလမ်းညွှန် Scout® GPS စနစ်က standard အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးသားပါ။ Lexus NX မှာဆိုရင် Apple CarPlay တို့ Amazon Alexa တို့နဲ့ အဆင်ပြေပြေချိတ်ဆက်သုံးနိုင်မယ့် Enform Wi-Fi™ စနစ်က ၁ နှစ် ဒါမှမဟုတ် 4GB data အထိ စမ်းသပ်အသုံးပြုလို့ရပါဦးမယ်။ Dynamic အသံထိန်းကြောင်းမှုနဲ့ Dynammic လမ်းညွှန်စနစ်ကတော့ optional ပါ။ ဒီ features တွေက RX မှာဆိုရင် 2020 RX ကျမှာသာ ရရှိနိုင်မယ့် အင်္ဂါရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
Lexus NX ရော RX ပါ dynamic gridlines တွေပါတဲ့ နောက်ကြည့်ကင်မရာ (backup camera) တွေပါဝင်တဲ့အတွက် ပါကင်ထိုးရမှာမှာ လွယ်ကူအစဉ်ပြေစေပါတယ်။ SUV နှစ်မျိုးစလုံးမှာက Lexus Safety System+ ဒါမှမဟုတ် Lexus Safety System+ 2.0 ကို standard အနေနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Lexus Safety System+ မှာက Pedestrian Detection (လမ်းလျှောက်သူများကို ကင်မရာမှတစ်ဆင့် ကားကသိရှိအချက်ပြနိုင်သောစနစ်) ၊ Lane Departure Alert (ယာဉ်ကြောပြောင်းအချက်ပြစနစ်) နဲ့အတူ Lane Keep Assist (ယာဉ်ကြောအတွင်းရှိနေစေရန် အထောက်အပံ့ပေးသောစနစ်) ၊ All-Speed Dynamic Radar Cruise Control (မြန်နှုန်းသတ်မှတ်မှုအပြင် ရှေ့ကား၏အနှေး/အမြန်အပေါ်မူတည်၍ အလိုအလျောက်လိုက်နိုင်သောစနစ်) နဲ့ Intelligent High Beams (အလိုအလျောက် မီးစအတိုး/အလျော့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော) စနစ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Lexus Safety System+ 2.0 မှာတော့ Lane Tracing Assist (Lane Keep Assist နဲ့ Radar Cruise Control တို့ပေါင်းစပ်ပြီး ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောစနစ်) နဲ့ Road Sign Assist (မောင်းနှင်သော လမ်းရှိသင်္ကေတများကို ကားမှဖတ်ခါ ယာဉ်မောင်းအားအချက်ပြသောစနစ်) တို့အပါအဝင် safety စနစ်တွေအများကြီးပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ NX အတွက်ရော RX အတွက်ပါ trim အလိုက် ဈေးနှုန်းတွေကို တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ 2019 models တွေအတွက်ဖြစ်ကြပြီး နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းတွေဖြစ်တာကိုတော့ တစ်ချက်ကလေး သတိပြုကြစေချင်ပါတယ်။
2019 LEXUS NX ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ $36,185 နဲ့စတင်ပြီး 2019 LEXUS RX ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ $43,570 နဲ့စတင်ပါတယ်။
Ref: Lexus RX vs. Lexus NX